Mamorona Tondrozotra nomerika ho an'ny orinasa mandroso | Martech Zone
Sabotsy, Oktobra 24, 2020 Sabotsy, Oktobra 24, 2020 Tim Duncan
Hatramin'ny nipoahan'ny areti-mandringana, nahita maso revolisiona niomerika isika, miaraka amin'ny fiovan'ny asa lavitra ary ny fidirana amin'ny serivisy ho an'ny serivisy noho ny teo aloha - fironana mety hitohy aorian'ny areti-mandringana. Araka ny McKinsey & Company, nandroso dimy taona lasa izahay tamin'ny alàlan'ny fananganana dizitaly ho an'ny mpanjifa sy ny orinasa tao anatin'ny herinandro vitsivitsy monja. Mihoatra ny 90 isan-jaton'ny mpitantana no manantena ny fianjerany avy amin'ny COVID-19 manova ifotony ny fomba fanaovan'izy ireo orinasa mandritra ny dimy taona ho avy, izay saika manasongadina ny areti-mandringana dia hisy fiatraikany maharitra amin'ny fitondran-tena sy ny filan'ny mpanjifa. Eny tokoa, 75 isan-jaton'ny mpanjifa izay nampiasa nomerika voalohany hatramin'ny drafitry ny areti-mandringana hanohy aorian'ny COVID-19. Manatevin-daharana tafika mitombo an'ny Mpanjifa mifandray, izay mifandray amin'ny marika amin'ny alàlan'ny fantsona nomerika toy ny tranokala sy ny rindranasa fotsiny.
Ireo mpanjifa mifandray, isaky ny taranaka fara mandimby, dia mahatsapa fatratra ny traikefa amin'ny marika ankapobeny ary lasa zatra ny serivisy ambony amin'ny Internet. Mampitaha traikefa tsara sy ratsy ireo mpanjifa ireo fa tsy mifaninana mivantana amin'ny vokatra sy serivisy mifaninana. Hotsarain'izy ireo ny zava-niainan'i Uber tamin'ny an'i Amazon, ary ny traikefa nahafinaritra indrindra dia ny andrasan'izy ireo farany amin'ny manaraka. Mitombo hatrany ny fanerena ho an'ireo orinasa mba hijery akaiky ireo marika ivelan'ny toerana misy azy ireo ary hanaraka ireo fanavaozana farany. Ny tatitry ny HBR dia mitanisa ny antony voalohany nanjavona mihoatra ny antsasaky ny 52 isan-jaton'ny Fortune 500 hatramin'ny taona 2000 ny tsy fahombiazan'izy ireo tamin'ny fanovana nomerika. Ny fiantohana ireo fantsom-pifandraisana nomerika dia mifanaraka, na tsara kokoa noho izany, ny mpifaninana mivantana sy ankolaka ho lakilen'ny fitomboana maharitra.
Fanatsarana ny dia an'ny mpanjifa
Ny tontolo misy ifandraisana hyper ankehitriny, miaraka amin'ny fiantraikan'ny areti-mifindra, dia nanafaingana ny andrasan'ny mpanjifa amin'ny anjara asan'ny nomerika amin'ny traikefa marika ara-batana. Ho an'ny orinasa maro, matetika ny dia an-tserasera dia tapaka sy efa lany andro, satria nanjary fanamby manokana ho an'ny mpanjifa ny hanana traikefa tsara rehefa mifandray amin'ny marika nomerika.
COVID-19 dia nipoitra ihany koa amin'ireo teboka fanaintainan'ny mpanjifa tsy voatanisa izay afaka manampy amin'ny famahana ny nomerika. Ireo singa amin'ny dian'ny mpanjifa izay niteraka fahasosorana talohan'ny areti-mandringana, toy ny fiandrasana amin'ny laharana sy ny fandoavam-bola, dia tsy maintsy atao tsy misy fifandraisana sy azo antoka izao, miantso fidirana an-tsehatra nomerika. Ny bara ho an'ny hatsarana dia nisondrotra be dia be; Mbola hitohy ny fiovan'ny fotoana maharitra amin'ny andrasan'ny mpanjifa momba ny fiarahan'ny mpiasa voafetra.
Hanova ny kolontsaina
Ho an'ny fikambanana hiroso amin'ny fanovana ho an'ny ho aviny nomerika dia ilaina ny mivezivezy amin'ny hafainganam-pandeha sy tanjona ary manala ireo silo. Ny varotra marika, ny traikefan'ny mpanjifa, ny tsy fivadihana ary ny asa dia tsy maintsy ampidirina ho fanohanana ny tanjona iraisana. Mba hamahana ny dian'ny mpanjifa tapaka sy hahatratrarana tanjona kendrena amin'ny fitomboana dia tokony hiray saina ny tsirairay ao amin'ny fikambanana amin'ny fahitana nomerika iraisana. Ity fahitana ity dia tsy maintsy adika amin'ny asa amin'ny alàlan'ny fampiroboroboana programa nomerika - fa tsy ny tetik'asa nomerika - miaraka amin'ny fifantohana tsy miato amin'ny mpanjifa. Ireo fikambanana mavesatra amin'ny toe-java-misy tetikasa fohy sy ekipa tsy manjary dia matetika no hamorona traikefa ho an'ny mpanjifa tsy manome aingam-panahy ary hamela ireo fitomboana lehibe eo amin'ny latabatra. Etsy ankilany, ny hetsika amin'ny fahitana iraisana momba ny hatsarana nomerika dia hanome valiny mahafa-po. Ireo orinasa misy ekipa mitambatra ireo - mampiasa, mianatra avy ary mihetsika amin'ny fahitana angon-drakitra - izay afaka mihetsika haingana sy porofo ho avy.
Ahoana no ahafahan'ny fikambanana mahatakatra ny fahitany nomerika?
Miaraka amin'ny fahitana lavitra ao an-tsaina, ny famaritana ireo imperita fitomboana manerana ny orinasa stratejika sy azo refesina dia zava-dehibe. Ireo imperita ireo dia mety misy ifandraisany amin'ny fanavahana, ny lanja, ny kalitao, na ny fampitoviana ny kianja filalaovana fifaninanana, ary tokony hifamatotra amin'ny vina nomerika an'ny orinasa amin'ny ankapobeny.
Na dia voafaritra manokana amin'ny dian'ny orinasa tsirairay sy ny haavon'ny fahamatorana dizitaly aza dia ireto misy fitsipika lehibe tokony hodinihin'ny orinasa tsirairay ho vonona ara-nomerika amin'ny ara-dalàna vaovao:
Fanandramana tsotra, tsy hay hadinoina ary voafintina - avelao ny mpanjifa hanao haingana sy mora amin'izay tiany atao
Manararaotra ny personalization raha azo atao - Mampiasà teknolojia hanompoana ny filan'ny mpanjifa tsirairay
Amporisiho ny fahita matetika ary mitondra ny tsy fivadihana - manararaotra ny herin'ny angon-drakitra hahafantarana ny fitondran-tena sy hamporisihana ny hetsika
Ampifandraiso ireo teknolojia efa misy ary ampiasao ny heriny iraisana - ny fomba tokana hitomboan'ny fitomboana dia amin'ny alàlan'ny fantsom-teknolojia voalamina tsara sy mahery
Vaky ny silo - mitady fomba hiaraha-miasa fanahy iniana hahasoa kokoa
Ny torohevitra lehibe azo raisina amin'ny orinasan-tserasera amin'izao toe-draharaha izao dia ny drafitra rahampitso fa tsy anio. Ny marika rehetra dia tokony hiezaka mafy sy hitazona tondrozotra nomerika iray manontolo hanosehana ny fitomboana sy ny fitomboan'ny vola miditra. Raha nampianatra antsika na inona na inona ny krizy dia tsy misy fotoana tsara kokoa hanaovana drafitra sy fanavaozana ho an'ny tontolo nomerika mihamitombo.
Tags: fiovanampanjifa mifandrayCovid-19tondrozotra nomerikafahitana nomerika
Tim Duncan dia fitarika fampiroboroboana vokatra ao amin'ny Bottle Rocket, mifantoka amin'ny fanampiana ireo marika hampitombo ny hetsika sarobidy ao anatin'ny traikefan'ny mpanjifany amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny mari-pahaizana momba ny fahazoana, ny fiovam-po, ny fidirana ary ny fitazonana. Talohan'ny Bottle Rocket, Tim dia niasa tao amin'ny IBM ho consultant momba ny fikirakirana ny raharaham-barotra ary nahazo diplaoma avy amin'ny University of Oklahoma miaraka amin'ny mari-pahaizana momba ny Siansa sivily.